प्रकाशित : सोमबार, असार २९, २०७७१३:४४
गसिप । हिरोइनका लागि यो लकडाउन मनको बह पोख्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम बनेको छ । झन् नातावाद र समूहवादको बहस चर्किएपछि त हिरोइनहरू पालैसँग विगत कोट्याउन थालेका छन् । यही क्रममा ‘अनुराग’ अभिनेत्री एलिजा गौतमले पनि आफूलाई फिल्मबाट निकालिएको गुनासो गरेकी छिन् ।
एलिजाले स्ट्याटस लेख्दै आफू विवाहित भएकै कारण फिल्मबाट निकालिनु परेको बताएकी छिन् । ‘मलाई राम्रो फिल्मबाट अफर आएको छ भने रातारात त्यहाँ हिरोइन परिवर्तन भइहाल्छ,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘किनकि, म त विवाहित हुँ । यस्तो कति फिल्ममा भएको छ । तर, नाम चाहिँ लिन्नँ ।’
आफैँले निर्माण गरेको फिल्म ‘अनुराग’बाट अभिनेत्रीमा डेब्यू गरेकी एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी हुन् । एलिजाले भनेझैँ विवाहित भएकै कारण उनले फिल्म नपाएकी पनि होलिन् । तर, यति कुरा भनेपछि आफूलाई त्यस्तो गर्ने फिल्म र फिल्मकर्मीको नाम पनि भनेको भए पो कुरा स्पष्ट हुन्थ्यो । अमूर्त कुरा गरेर त कसरी उनलाई पत्याउलान् ? यसबारे उनकै श्रीमान् पत्रकार धमलाको शैलीमा भन्नु अनुपयुक्त नहोला– उनलाई कुन फिल्मबाट निकालियो ? जनता जान्न चाहन्छ !
(सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट साभार)
‘जाइरालाई न्याय गरेकी छु’ नम्रता
‘इन्टरनेशनल फेशन फेष्टिबल’ मा प्रतियोगि छनोट सुरु
सुशान्तलाइ नेशनल अवार्डमा सम्मान ?
आकाश र उमाको ‘चोखो प्रेमको नजर’ (भिडियो)